मौसम परिवर्तनको प्रतीकको रूपमा ग्रे हिमनदी भंग | नेटवर्क मौसम विज्ञान
मौसम परिवर्तन ग्रहको वरिपरि तापक्रम बढ्दै जान्छ। यसले हिमनदी र खम्बालाई पिघलिरहेको छ। एउटा स्पष्ट उदाहरण जुन यो भइरहेको छ फ्र्याक्चर जुन मा भएको छ खरानी ग्लेशियर, मा स्थित चिली मा Torres डेल पेन राष्ट्रीय पार्क।
हिमनदीहरूको पग्लिको समुद्री सतहका लागि गम्भीर परिणामहरू छन् र तसर्थ, समुद्री तटका शहरहरूमा। ग्रे ग्लेशियर फ्र्याक्चरको कारणले के प्रभाव हुन सक्छ?
1 मौसम परिवर्तन र पिघलने ग्लेशियरहरू
2 खरानी ग्लेशियर फ्रैक्चर
3 नगर परिषदले मौसम परिवर्तनको बिरूद्ध के गर्न सक्छ?
मौसम परिवर्तन र पिघलने ग्लेशियरहरू
ग्रे ग्लेशियर मुद्दाको साथ सुरू गर्नु अघि, ध्रुवीय बरफ टोपीहरूको गलाउने र समुद्री सतहको बढ्दो बारेमा एउटा सानो गलत धारणा हटाउनु पर्छ। यो सत्य हो कि यसले समुद्री सतहमा वृद्धि गराउँछ, तर यसले यस तरिकाले काम गर्दैन। यो ध्यानमा राख्नुपर्दछ कि उत्तरी ध्रुवमा जस्तै समुद्रमा तैरिएको हिमशिलाले पानीको मात्रामा नै कब्जा गरिसकेको हुन्छ, तरल अवस्थामा फर्कने बित्तिकै यो ठूलो हुनेछ। उत्तरी ध्रुवको पग्लिदै यसले समुद्री सतह बढ्न दिदैन।
अर्कोतर्फ, अन्टार्कटिकामा हिमनदीहरू महाद्वीपीय शेल्फको शीर्षमा पर्छन्, त्यसैले जब तिनीहरू पग्लन्छन्, समुद्रले पानीको मात्रा बढ्नेछ।
खरानी ग्लेशियर फ्रैक्चर
यस हप्ता बरफको एउटा ठूलो ब्लकले ग्रे ग्लेशियरलाई तोड्यो। आइस ब्लकको आयाम 350 380०x12० मीटर छ र १२ बर्षदेखि यसले 900 ०० क्यूबिक मिटर बराबरको खण्ड गुमाउँदैछ।
मौसम परिवर्तन भनेको सब भन्दा बलियो विश्वव्यापी समस्या हो जुन मानवताले सामना गरिरहेको छ। चिलियन्सको% 78% उनीहरुको विश्वास छ कि जलवायु परिवर्तनको बिरूद्धको लडाईलाई देशको आर्थिक विकासमा प्राथमिकता दिइनु पर्दछ।
"मौसम परिवर्तन अहिले भइरहेको छ र यो यहाँ भइरहेको छ। यो चिलीवासीहरुका बारे एकदमै स्पष्ट छ "राष्ट्रपतिले भने, जलवायु परिवर्तनको बिरूद्ध नगरपालिकाको चिली नेटवर्क र नाफा नकमाउने संस्था एडाप्ट चिलीले आयोजना गरेको फोरम अफ मेयर एण्ड क्लाइमेट चेंजको उद्घाटन गर्दा राष्ट्रपतिले भने।
यद्यपि धेरै मानिसहरूले यसलाई महत्त्वपूर्ण ठान्दैनन्, यो महत्वपूर्ण छ कि स्थानीय सरकारले जलवायु परिवर्तनलाई कम गर्नका लागि कदम चाल्नु पर्छ ताकि स्थानीयदेखि विश्वव्यापी रूपमा। सीमित दायरामा साना कार्यहरू ती हुन् जुन अन्तमा विश्वभरि कार्य गर्दछन्।
नगर परिषदले मौसम परिवर्तनको बिरूद्ध के गर्न सक्छ?
चिलीका शासक, Michelle Bachelet, ले एक कार्यक्रमको उद्घाटन गरेको छ जसमा नगरपालिकाले गर्न सक्ने कार्यलाई स्थानीय स्तरमा जलवायु परिवर्तन रोक्नको लागि प्रचार गर्न चाहिएको हो। कार्यक्रमको अवधिमा प्रस्तावित नीतिहरू चिलीका नगरपालिकाहरूमा सुरू गर्न, डिजाइन गर्न र लागू गर्न सकिन्छ।
यो घटनाले सम्पूर्ण ग्रहलाई असर गर्ने महत्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दछ, जस्तै अनुगमन पेरिस सम्झौता, मौसम परिवर्तन र अनुकूलनको लागि कार्यहरू जलवायु कार्य एजेन्डा को उद्देश्य संग।
ग्रे ग्लेशियरमा भएको एक जस्तै अस्थिहरू एक अपरिहार्य र अपरिवर्तनीय ग्लोबल वार्मिंग परिदृश्यको हिस्सा हुनेछ। अगाडि उल्लेख गरिएझैं समुद्री सतहको बढ्दो घटनाबाट प्रभावित मुख्य बाढीको जोखिमले तटीय शहरहरू हुनेछन्।
यस हिमनदीको फ्र्याक्चरको सबैभन्दा तत्काल नकरात्मक प्रभाव भनेको नेभिगेसनमा समस्या पैदा गर्ने समस्या हो।
नकारात्मक सन्तुलन संसारका सबै हिमनदीहरु मा पाउन सकिन्छ। त्यो भन्नु पर्ने हो, अधिक बरफ हिउँको स by्ग्रहले प्राप्त गरेको भन्दा पिघलनेले हराइरहेको छ। यो प्रवृत्तिले केवल ग्रे हिमनदीलाई असर गरिरहेको छैन, तर त्यहाँ हिमनदीहरू छन् जुन तेह्र किलोमिटरमा गुमाएको तीन दशक भन्दा कममा।
यो प्रवृत्ति प्रत्येक वर्ष जारी रहन्छ यदि ग्लोबल वार्मिंग रोक्दैन भने।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » मौसम परिवर्तन » मौसम परिवर्तनको प्रतीकको रूपमा ग्रे हिमनदी भंग